RHA T20, famakafakana sy hevitra | Androidsis
RHA T20, famakafakana sy hevitra: headphones premium manaitra miaraka amina kalitao feo hifanaraka amin'ny famaranana
Alfonso de Frutos | | About us, Fitaovana hafa, hevitra
RHA dia manao doka ao amin'ny firenentsika noho ireo vahaolana tsy mampino ao aminy; Efa namoaka fanamarihana marobe momba ny vokatra sasany nataony aho, toy ny RHA MA750 na ny RHA T10 ankoatry ny hafa. Ankehitriny dia anjaran'ny RHA T20 mainty, ny firavaka amin'ny satro-boninahitr'ilay mpanamboatra monina Glasgow.
Fandraisana an-tsofina an-tsofina miaraka amina famaranana mahavariana, manaraka ny vokatra RHA rehetra, ary ny kalitaon'ny feo amin'ny haavon'ny elanelana misy azy. Tsy misy resaka intsony, avelako miaraka aminy ianao Fanadihadiana RHA T20, iray amin'ny telefaona an-tsofina tsara indrindra eny an-tsena.
1 RHA T20, headphone feno kojakoja
2 Volavola mahafinaritra sy tsara kalitao
3 Kalitaon'ny feo tena tsara
4 Toetran'ny teknika
4.2 haino aman-jery
5 Antoka iray tena feno
7.1 Isa manohana
7.3 Hevitra manohitra
RHA T20, headphone feno kojakoja
Ny fahagagana lehibe voalohany azonao rehefa manokatra ny boaty ianao dia ny fonosana tsy mampino. RHA dia mikarakara ny antsipiriany rehetra Ary tamin'ny RHA T20s, dia tsy ho afa-maina. Amin'izany no ahitantsika ny vokatra mampiseho ny fikarakaran'ireo mpanamboatra ny antsipiriany rehetra.
Rehefa manokatra ilay boaty izahay dia mahita fonosana tonga lafatra sy tena feno. Efa nolazaiko anao fa tsy mila mividy kojakoja intsony ianao, miaraka amin'ny headphones, ny ekipa RHA dia nampiditra andian-jiro izay tsy hihoatra ny fanantenan'ny mpampiasa rehetra.
Hanombohana ilay boaty dia misy a fonosana vy tsy misy fangarony miaraka amina paosy silikaly avo roa heny, miaraka amin'ny fepetra samihafa arakaraka ny lakandranon'ny sofina tsirairay. Tsy maintsy ampiana pad-profil roa miaraka amin'ny habe antonony sy lehibe isika amin'izany. Ary raha mbola tsy vitanao ny mampiditra ny sofina an-tsofina ao an-tsofinao, dia misy koa tsiranoka roa tadim-poza ho an'ny sofina mba hifanaraka tsara amin'ny lakandrenin'ny sofinao.
Tsy maintsy ampiana ity ny boaty mitondra izay tonga ao anaty fonosana ary hahafahanao mitondra ny headphones RHA T20 tsy misy tahotra ny fahatapahana. Na dia efa nolazaiko taminao aza fa ho sarotra be amin'ireo headphone ireo ny miaritra fahasimbana satria ny fitaovana anaovana azy ireo, vy tsy misy fangarony, dia manome ny RHA T20 mahatohitra maharitra sy maharitra. Farany dia manana andiana sivana izay hampiasainay miankina amin'ny karazana mozika henointsika, na dia hiresaka momba ireo sivana ireo amin'ny antsipiriany bebe kokoa aza aho ao amin'ilay faritra mifanaraka amin'izany.
Volavola mahafinaritra sy tsara kalitao
Jereo fotsiny ny headphones dia tsapanao fa ny kalitaon'ny RHA T20i ho an'ny poresanao tsirairay. Fotoana vitsy no nahitako écouteur an-tsofina izay raha vao jerena dia maneho kalitao toy izany.
Hanombohana azy, ny headphones dia namboarina tamin'ny vy tsy voatsindrona 303F, manolotra fijery matanjaka sy maharitra. Efa zatra ny zava-misy fa somary maharitra kely fotsiny ny headphones amiko, tsy mihoatra ny herintaona, fa raha ny momba ny RHA T20 dia afaka manome toky aho fa afaka mitantana ny zava-drehetra izy ireo.
Ary ny RHA T20 dia manana a 1.35 metatra lava tariby mitondra-doka vita amin'ny varahina tsy misy oxygen, mifono vy, vy nohamafisina vy izay manome fanoherana lehibe sy fahatsapana faharetana. Izy io koa dia misy lohataona vy amin'ny mpampitohy izay hisorohana ny fahasimban'ny natiora rehefa mandeha ny fotoana fifandraisana, izay manana fandroana volamena hanatsarana ny fitarihana.
Ny RHA T20 dia manana a faritra azo volavolaina izay hanodidina ny lamosin'ny sofina hitazona ny headphones. Ny milaza fa ireo torolàlana ireo dia mahazo aina tokoa ary amin'izao fotoana izao dia efa zatra izany. Ny ampahany amin'ny trosa dia mandeha amin'ny lanjany maivana, 39 grama, amin'ireo fonosana ireo na dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony aza. Nampiasako an-tariby nandritra ny ora maro ireto headphones ireto nefa tsy tsikaritro izay tsy mahazo aina ato an-tsofiko.
Asongadino izany Misy kinova roa amin'ireo headphones ireo: ny RHA T20 sy ny T20i. Ny tena maha samy hafa azy dia ny maodely farany misy mikrô namboarina sy fanaraha-maso ny volavola, mitentina 10 euro mihoatra ny maodely T20 mahazatra.
Ny fehin-kevitro momba ny famolavolana dia mazava be: ny RHA T20 dia natsangana niaraka tamina fitaovana premium izay mampanantena famaranana, fahatsapana ary faharetana tena miavaka. Tena ahazoana aina izy ireo ampiasaina, manitsy tanteraka ny sofina rehetra noho ny habetsaky ny fonosan'ny sofina ao anatiny, ary koa ny fanolorana rafi-pitokisana mitabataba ivelany. Amin'ity lafiny ity Nofantsihan'i RHA tamin'ny alàlan'ny fanolorana vokatra tena feno.
Kalitaon'ny feo tena tsara
Efa nataoko mazava tsara fa ny famolavolana sy ny famaranana ny RHA T20 dia mampiseho ny asa tsara nataon'ny mpanamboatra anglisy amin'ity lafiny ity. Fa ny sofina dia natao hihainoana mozika fa tsy ho fampisehoana azy ireo. Ary tena tsara ny feon'ny RHA T20. Tena gaga tamin'ny fahasamihafana eo amin'ny kalitaon'ny RHA T10 aho, izay namela ahy fahatsapana goavambe sy ny RHA T20 tamin'izay fotoana izay, mampiseho indray ny asa lehibe nataon'ny mpanamboatra anglisy. Ho an'ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny, eo amin'ny 50 euro eo ho eo, mamporisika ny hividy ny T20 aho, ny fahasamihafana dia mihoatra ny mahatalanjona.
Fa inona no tena maha samy hafa azy raha oharina amin'ny RHA T10? ny DualCoil transducer mavitrika, mifangaro amin'ny coil roa mihetsika ka ny tsirairay amin'izy ireo dia mandrakotra habetsaky ny refesina sasany, ka mamindra feo madio kokoa, misy kalitao tsara kokoa ary mifanaraka amin'ny fanamarinana avo lenta an'ny vokatra.
lanja Gramin'ny 39
Transducers Dynamic Dual Coil (DualCoil ™)
Faritra matetika 16-40.000Hz
Herin'ny Nominal / Max 2/5 mW
Cable 1.35 metatra OFC tariby mitondra-doka maro
fifandraisana Nopetahany takela-bolamena 3.5mm
Ho an'ny vao manomboka, ny T20 dia miaraka amina seta telo sivana azo ovaina izay mamela anao hanova ny valiny arakaraka ny karazana mozika, manolotra feo tsy miandany (Reference), manatsara ny bass (Bass) na manatsara ny treble (Treble).
Matetika rehefa misy safidy ho an'ny sivana azo ovaina dia matetika no ajanoko ny safidin'ny bass satria miakatra tsy voajanahary izy io, mamoy ny elanelam-potoana hafa. Ary amin'ny sivana RHA dia tsy ho faningana izany. ny sivana treble dia manao asa miavaka. Nankafy hira mavesatra marobe aho ary ny fitondran-tena ny sivana Treble dia avo lenta. Tsy misy manohitra.
Amin'izany fomba izany, Taorian'ny fitsapana mafy mba hijerena ny fomba fiasan'ireo sivana telo, dia tavela niaraka tamina sivana izay namboarina ho toy ny fenitra, ilay "référence", satria izy no manolotra ny feo, araka ny hevitro, mandanjalanja kokoa amin'ny karazana mozika sy ny fanovana sivana arakaraka izay reko dia somary manelingelina amin'ny farany.
Haavo ny bass dia kely nivonto noho ny maodely teo aloha, manolotra ny RHA T20 bass mahay mandanjalanja sy marina kokoa. Mahafinaritra tokoa ny bas, manome frezy tonga lafatra izay tsy ho reraka rehefa mandeha ny fotoana, na dia heveriko fa manohy manery kely ny bas aza izy ireo raha ampitahaina amin'ireo maodely hafa mitovy amin'io.
Amin'izao fotoana izao, ny zavatra niainan'i tena tsara ny feo. Ny refesina afovoany dia manolotra tonon-kira voajanahary tena manosika milamina sy sarotra tadiavina. Tahaka ny maodely teo aloha, ny RHA T20s dia manolotra tendrony avo kokoa amin'ny alàlan'ny haavo antonony manome feo manintona kokoa sy velona kokoa.
Eto no tonga ny teboka mahery an'ny RHA T20 izay manolotra ny sasany haavo mamiratra miaraka amin'ny fanitarana lehibe. Manasongadina indrindra ireo feony avo lenta manome feo malefaka hahitanao mpifaninana vitsivitsy izay mahatratra ny kalitaony: tsara indrindra ny asa vitan'i RHA amin'ity lafiny ity.
Ny antsipiriany iray hafa izay tena tiako indrindra momba ireny headphone ireny dia ny zava-misy ny feo dia mitazona ny kalitaony amin'ny fotoana rehetrana na inona na inona volanao ampiasainao, izay nanaitra ahy tamim-pifaliana.
Antoka iray tena feno
Tsy mahazatra ahy ny miresaka momba ny antoka omen'ny mpanamboatra rehefa miresaka momba ny vokatra iray aho, fa amin'ny RHA dia mila maningana aho. Ary izany ve ny mpanamboatra manolotra antoka 3-taona ho an'ny vokatrao rehetra ary ny mekanisma dia tena tsotra sy mahomby: mila fenoy ny takelaka fotsiny ianao, azonao atao ny mameno azy amin'ny teny Espaniôla, ao amin'ny tranokala RHA ary halefan'izy ireo aminao ny adiresy izay tokony andefasanao ny headphones ka azonao atao ny manamarina, manamboatra na mandefa vaovao anao.
Izaho dia nampiasa ny antoka nataonao ary tokony hiaiky aho fa vitsy dia vitsy ny fiainana. Azoko ampitahaina amin'ny fiantohana Apple, fa ny Cupertino dia tsy manome afa-tsy garanty 1 taona, raha toa ka maharitra telo taona ny bandy RHA. Eto dia manana lahatsoratra feno ianao Miresaka momba ny fomba fiasan'ny fiantohana RHA aho
Aorian'ny fitsapana ny RHA T20 mandritra ny iray volana dia azoko antoka izany ireo headphones ireo no tsara indrindra ezahiko. Fantatro fa ny vidiny, hitanao amin'ny vidiny 229.99 euro any Amazon izany, mihoatra lavitra ny teti-bola izay matetika no ao an-tsaintsika rehefa mividy «headphone». Fa manome toky aho fa tena tsara ny feo RHA T20 ary ny famaranana sy ny famolavolana azy no mahatonga azy io ho iray amin'ireo safidy tsara indrindra hodinihina. Mazava ho azy, ny fomba tsara indrindra hankafizana ny fahafahany feno dia amin'ny alàlan'ny fampiasana fitaovana misy fanodinana feo tsara, toy ny LG V10 mahery sy ny HiFi DAC 32-bit.
Famaranana avo lenta
Ny headphone dia mahazatra miaraka amin'ny kojakoja maro
Ny kalitaon'ny feo dia tsara
Vidiny ho tratry ny vitsy ihany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » RHA T20, famakafakana sy hevitra: headphones premium manaitra miaraka amina kalitao feo hifanaraka amin'ny famaranana
jonnathan dia hoy izy:
Tena lafo izy ireo
Ary ratsy loatra fa ratsy tarehy izy ireo.
Toy ny freak
Mamaly an'i jonnathan
Ny fampiharana YouTube dia hampiditra sivana vaovao ao amin'ny valin'ny karoka
[APK] Google Maps dia havaozina amin'ny fikarohana amin'ny bisikileta / zotra mandeha, FAB vaovao ary maro hafa